झापा र थ्रीस्टारबीचको पहिलो सेमिफाइनल भिडन्त आज – Khel Dainik
झापा र थ्रीस्टारबीचको पहिलो सेमिफाइनल भिडन्त आज
फाल्गुन २५, २०७४ | (PostaComment)
बिर्तामोड (खेलदैनिक) । रमपम तेस्रो झापा गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगितातर्फ आज पहिलो सेमिफाइनलमा आयोजक रमपम झापा–११ र रुस्लान थ्रीस्टार क्लब भिड्दै छन् ।
बिर्ता बजारस्थित डोमालाल राजवंशी खेल मैदानमा हने आजको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । यस सिजन खराब लयमा देखिएको झापाले घरेलु मैदानमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्म यात्रा तय गर्यो । आफ्नो पहिलो खेलमा सुदुरपश्चिमलाई हराएको झापाले दोस्रो खेलमा युनाइटेड सिक्किमलाई पराजित गरेको थियो ।
उता सोझै बाई पाएर क्वाटरफाइनलमा भिडेको थ्रीस्टारले भने विभागीय टोली एपिएफलाई हराउँदै अन्तिम चारमा आफ्नो सुरक्षित गरेको थियो । लय समाउने प्रयासमा रहेको झापा र लामो समयपश्चात घरेलु फुटबलमा सक्रिय भएको पाटने क्लब थ्रीस्टारबीच आज ३ बजे शुरु हुने सेमिफाइनल भिडन्त रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
कुन टिमलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ ? कति होला आजको नतिजा ?
← विश्वकप छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार नेपाल लगातार पाँचौं पटक सेमिफाइनलमा →
भरत र नवयुग अमेरिका जाँदै फाल्गुन २५, २०७४
यू डायमन्डलाई महिला भलिबल उपाधि फाल्गुन २५, २०७४
महेन्द्र रत्नलाई भलिबल उपाधि फाल्गुन २५, २०७४
साफ यु–२० च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई रेफ्रीले पनि खेलाउने फाल्गुन २५, २०७४
टिवाईटी कप शुरु, पेनाङ र कारोको बराबरी फाल्गुन २५, २०७४
अक्सफोर्ड बन्यो क्रिमसन कप च्याम्पियन फाल्गुन २५, २०७४